Soo Saaraha Ugu Wanaagsan GJCNC-BB-S & Warshad | Gaoji
1. Xoog wax soo saar: 350Kn
2. Min U-qaab ballac u laaban: 40mm
3. Cadaadiska dareeraha ugu badan: 31.5Mpa
4. Xajmiga Maxjarka ugu Weyn: 200 * 12mm (Laabaad toosan) / 12 * 120mm (Qaloocan Horizontal)
5. Malaa'ig laabanaysa: 90 ~ 180 degree
Taxanaha GJCNC-BB waxaa loogu talagalay inuu foorarsado shaqooyinka basaska si hufan oo sax ah
CNC Busbar Bender waa qalab khaas ah oo foorarinaya busbar oo ay maamusho kombiyuutarka, Iyada oo loo marayo X-dhidibka iyo iskuduwaha Y-axis, quudinta gacanta, mashiinku wuxuu dhammeyn karaa noocyada kala duwan ee ficilada foorarsiga sida foorarka heerka, foorarsiga tooska ah iyada oo loo marayo xulashada dhimashooyin kala duwan. Mashiinka wuxuu la jaan qaadi karaa barnaamijka GJ3D, kaas oo si sax ah u xisaabin kara dhererka kordhinta foorarka. Softiweerku wuxuu si otomaatig ah u heli karaa isku xigxiga foorarka shaqada oo u baahan dhowr jeer oo foorarsi ah iyo otomaatigga barnaamijka ayaa la ogaaday.
Mashiinkaani wuxuu qaataa qaab-dhismeedka foorarsiga nooca xiran ee gaarka ah, wuxuu leeyahay hantida ugu sareysa ee foorarsiga nooca xiran, sidoo kale wuxuu ku habboon yahay nooca foorarsiga nooca furan.
Qaybta Laabista (Y-axis) waxay leedahay shaqada magdhawga qaladka xagasha, saxnaanta foorarka waxay la kulmi kartaa heerka waxqabadka sare. ° 01 °
Marka ay ku socoto foorarsiga toosan, mashiinku wuxuu leeyahay hawsha isku-xirnaanta otomaatiga iyo sii deynta, waxtarka wax-qabadka si aad ah ayaa loo hagaajiyaa marka la barbardhigo iskudhafka iyo sii deynta.
GJ3D Barnaamijyada barnaamijka
Inorder si loo xaqiijiyo keydinta otomaatiga, ku habboon oo si fudud u shaqeynaya, waxaan naqshadeyneynaa oo horumarinaynaa barnaamijka gaarka ah ee loo yaqaan 'GJ3D software design design'. Software-kan wuxuu si otomaatig ah u xisaabin karaa taariikh kasta oo ka mid ah howsha busbar-ka oo dhan, sidaas darteed waxay awood u leedahay inay ka fogaato waxyaabaha qashinka keena oo ay ku khaldan tahay koodh gacmeedka; iyo sida shirkaddii ugu horreysay ay u adeegsato tikniyoolajiyada 3D warshadaha wax lagu farsameeyo busbar, softiweerku wuxuu soo bandhigi karaa geeddi-socodka oo dhan oo ah nooca 3D kaas oo ka sii cad oo waxtar badan abid.
Haddii aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho macluumaadka dejinta qalabka ama xuduudaha aasaasiga u dhinta. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa taariikhda cutubkan.
Isdhexgalka aadanaha-kumbuyuutarka, hawlgalku waa mid fudud oo muujin kara waqtiga dhabta ah ee xaaladda hawlgalka barnaamijka, shaashadda ayaa muujin karta macluumaadka alaarmiga ee mashiinka; waxay dejin kartaa xuduudaha aasaasiga ah ee dhimista iyo xakamaynta hawlgalka mashiinka.
Nidaamka Howlgalka Xawaaraha Sare
Gudbinta kubbadda saxda ah ee kubbadda saxda ah, oo la jaanqaadaya hage toosan oo toosan, saxnaan sare, dhaqso badan oo dhaqso leh, waqti adeeg dheer iyo buuq la'aan.
Wadarta Miisaanka (kg) 2300 Aragti (mm) 6000 * 3500 * 1600
Cadaadiska Dheecaanka Max (Mpa) 31.5 Awoodda ugu weyn (kw) 6
Xoog wax soo saar (kn) 350 Max Stoke oo foorarsiga ah (mm) 250
Xajmiga Waxyaabaha ugu Badan (Laabaadka Gaaban) 200 * 12 mm Xajmiga Waxyaabaha ugu Badan (Laabashada Jiifka) 120 * 12 mm
Xawaaraha ugu badan ee madaxa Laabista (m / min) 5 (Habka degdegga ah) /1.25 (Qaabka gaabiska ah) Xagasha Laabista Max (Darajo) 90
Xawaaraha ugu badan ee Qalabka dhinaca dambe (m / min) 15 Stoke of Material lateral block (X Axis) 2000
Xaqiijinta Laabista (degree) Auto compensation <±0.5Manual compensation <±0.2 Min U-qaabka Weyn Laabista (mm) 40 (Xusuusin: fadlan la tasho shirkadeena markaad u baahato nooc yar)